मनोरंजन Archives - E mechi
May112019 by emechiNo Comments
ईटहरी/ गर्मीको मारमा सबैजना परेका छन् । यता नायिका प्रीयंका कार्कीलाई पनि यो गर्मीले सताउन छोडेन । त्यसैले गर्मी भुलाउन आफ्नो नजिकको साथिहरु संग रुपाकोट पुगेकी छिन् । पुगेर गर्मी भुलाउन रुपाकोट रिसोर्टको स्विमिङ पुलमा बिकिनी फोटो खिच्दै आफ्नो सामाजिक संजाल फेसबुक र ईन्स्टाग्राममा सार्बजनिक गरेकी छिन् । जहाँ आफू र आफ्ना साथिहरु संग मस्ती गरि गर्मी भुलाईरहेको देख्न सकिन्छ । उनको सो तस्वीरलाई उनका पति आयुष्मान देशराजले कैद गरेका हुन भनेर वुझ्न सकिन्छ । हेर्नुस् तस्वीरहरु ।
करण जोहरको फिल्मबाट डेब्यू गर्दैछिन् श्रीदेवीकी कान्छी छोरी खुसी
जान्ह्वी कपुरपछि अब उनकी बहिनी खुसी कपुर पनि चाँडै नै बलिउडमा डेब्यू गर्ने तयारीमा छिन् । खुसी आफैंले यो कुराको जानकारी दिएकी हुन् । जान्ह्वी र खुसी नेहा धुपियाको सेलिब्रिटी टक शो ‘बिएफएफ्स विद भोग’ मा पुगे । त्यहाँ उनीहरुले आफ्ना नीजि जीवनबारे कुराकानी गरे । साथै खुसीले आफ्नो बलिउड डेब्यूको योजना पनि सार्वजनिक गरिन् । खुसीले भनिन्, ‘ म चाँडै नै बलिउडमा डेब्यू गर्नेछु । पहिलो फिल्म म करण जोहरसँग गर्न चाहन्छु । तर मलाई थाहा छ कि मेरो फिल्मको हिरो मेरो बुवाले नै छान्नुहुनेछ । किनभने उहाँ मप्रति निकै प्रोटेक्टिभ हुनुहुन्छ ।’ नेहाको शोमा खुसीले बुवासँगको सम्बन्धबारे पनि कुराकानी गरेकी छिन् । खुसी भन्छिन्, ‘म घरकी कान्छी छोरी हुँ त्यसकारण बुवाले मेरो निकै ख्याल राख्नुहुन्छ । मेरो लागि घरमा कर्फ्यूजस्तो स्थिती हुन्छ । म कहाँ छु, कोसँग छु, कहिलेसम्म बाहिर बस्नेछुलगायतका सम्पूर्ण जानकारी बु
मृत्यु अगाडी संजय दत्तकी जेठी श्रीमती ऋचाले लेखेको अन्तिम पत्र सामाजिक संजालमा भाइरल, छोरी त्रिशलाले सार्वजनिक आफ्नी आमाको अन्तिम पत्र ! (पत्रसहित)
एजेन्सी, ११ बैशाख । प्रेम, विवाह, बिछोड, सम्बन्ध बिच्छेद मात्रै नभएर जेल नेल समेत भोगेका बलिउड अभिनेता संजय दत्तको जीवन वास्तवमै उतारचढावले भरिएको छ । संजयको जीवनमा कति प्रेमिका आए त्यसको लेखाजोखा नै छैन । विवाहमा समेत ‘ह्याट्रिक’ गर्न भ्याएका भन्दै उनको मजाक समेत उडाउने गरिन्छ । ऋचा शर्मा, रिया पिल्लई र मान्यता दत्तसँग संजयले विवाह गरेका हुन् । हाल उनी मान्यतासंग सुखद दाम्पत्य सम्बन्धमा छन् । तर मान्यता भन्दा अगाडीकी श्रीमती रियासँगको सम्बन्ध भने केहि खास हुन सकेन । पहिलो श्रीमती ऋचाको मृत्यु भएपछि संजयले सन् १९९८ मा रिया पिल्लईसँग विवाह गरेका थिए । संजयले रिया पिल्लईसँगको सम्बन्ध पनि टिकाउन सकेनन् । जसको कारण सन् २००५ मा यी दुईको सम्बन्ध विच्छेद भयो । संजय दत्तको पहिलो श्रीमती ऋचा शर्माको क्यान्सरको कारण मृत्यु भएको त धेरैलाई थाहा नै होला । सँगै चलचित्रहरुमा काम गरिसकेका यी दुईक
एजेन्सी । चर्चीत बलिउड स्टार शाहरुख खान भिलेनको भुमिकामा देखिने भएका छन् । किंग खान भारतीय साउथ फिल्ममासमेत निकै रुचाइएका छन् । यसैबीच उनी साउथ स्टार विजयको फिल्म Thalapathy 63 मा भिलेनको रोल प्ले गर्नसक्ने भएको भारतीय मीडियाहरुले जनाएका छन् । फिल्ममा कुनै वलिउड एक्टरको आवश्यक्ता रहेको थियो । सोही अनुसार शाहरुख खानलाई सम्पर्क गरेपछि उनले भुमिका निभाउन सक्ने जनाएका छन् । तर यस्काे आधिकारीक पुष्टि भने भएको छैन् । शाहरुखको खानले १५ मिनेटको भुमिका निभाउने र त्यसका लागि चेन्नइ या मुम्बईमा ३-४ दिनको सुटिंग हुने जनाइएको छ । त्यस्तै शाहरुख खानले सलमानको फिल्म दबंग ३ मा समेत केमियोको भुमिका निभाउन सक्ने बताइएको छ । र यो पनि पढ्नुहोस गौरीको लागि ५ वर्षसम्म हिन्दुबाट मुस्लिम बनेका शाहरुख यस्तो छ प्रेम कहानी बलिउडका एक प्रेमील र नमुना जोडी मानिएका शाहरुख खान र गौरी खानले विवाह भएको २७ व
यी हुन् विश्वकै उत्कृष्ट फिगर भएकी मोडल, जसको तस्वीर देखेर तपाई पर्नुहुनेछ छक्क ! (तस्विर हेर्नुहोस)
काठमाडौं – अमेरिकाकी एक मोडलले आफ्नो फिगर संसारकै उत्कृष्ट भएको दावी गरेकी छन् । आफ्नो सुन्दर फिगरको कारण चर्चामा रहेकी उनले सुन्दरताको कारण सबैलाई आर्कषित गर्ने गरेकी छन् । मोडल फिओरेल्ला क्यास्टनेद अमेरिकाकी स्थायी वासिन्दा हुन् । उनको सुन्दरताको हद अन्य महिला भन्दा छुट्टै रहेको छ । जसको फिगर देखेर जो कोही पनि नहेरी बस्न सक्दैनन् । उनी आफ्नो सुन्दरताको कारण यतिबेला सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएकी छन् । सामाजिक सञ्जालमा उनको फिगरलाई निकै रुचाइएको छ । छोटो समयमा नै मोडलिङशुरु गरेकी उनी अहिले चर्चाको शिखरमा पुगेकी छन् । उनको फिगर्सले धेरैलाई फिदा बनाएको छ । उनले सामाजिक सञ्जालमा लाखौँ फलोअर्स पनि कमाएकी छन् ।
काठमाडौं – वर्ष ०७५ को प्रणय दिवसका दिन बिहे गरेका वर्षा राउत र सञ्जोग कोइराला यतिबेला हनिमुन मनाउन फ्रान्स पुगेका छन् ।बिहेलगत्तै फिल्मकै काम बाँकी रहेकाले धेरै समय बिताउन नपाएको यो जोडी आफ्नो वैवाहिक जीवन मा निकै खुशी छ ।नायक सञ्जोग कोइरालाको व्यवसाय पनि छ भने नायिका वर्षा राउत अहिलेकी चर्चित नायिकामा पर्छिन् । यतिबेला हनिमुनका लागि फ्रान्समा रहेका सञ्जोग कोइराला र वर्षा राउतले सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो केही तस्वीर शेयर गरेका छन्।तस्वीरमा फ्रान्सको आइफेल टावर पनि देख्न सकिन्छ । गत वर्षको फागुनमा अग्नीलाई साक्षी राखेर सात जन्मसम्म सँगै जीवन विताउने कसम आएका क्यूट कपल वर्षा राउत र संजोग कोइराला अहिले हनिमुन ट्रिपमा छन् । केही दिन अगाडि मात्र उनीहरु हनिमुन मनाउन फ्रान्स उडेका थिए । अहिले उनीहरु फ्रान्सको राजधानी पेरिसका रमणीय स्थानहरु धुमधाममा व्यस्त छन् । अभिनेत्री वर्षाले पेरिस पुगेसँग
नागिन सिरियलबाट चर्चा कमाएकी मोनी रायको ‘ग्ल्यामर’ लूक भाइरल ( हेर्नुहोस् तस्वीरहरू)
मुम्बई – भारतीय टिभी शो मा छाएर फ्यानको दिलमा राज गर्न सफल कलाकार मोनी राय आफ्नो रुपका कारण चर्चामा रहन्छिन् । छोटो पर्दामा आफ्नो अभिनय करिअरको शुरुवात गरेकी मोनीले फिल्म ‘गोल्ड’ बाट बलिउडमा पाइला चालेकी थिइन् । हालै उनको फिल्म ‘र’ रिलिज भएको थियो । मोनीले फिल्म र टिभी सिरियलमा काम गर्नका साथै सामाजिक सञ्जालमा पनि सक्रिय रहने गर्छिन् । इन्स्टाग्राममा उनले कैयन् तस्वीर र भिडियो शेयर गरेकी छिन् । यी तस्वीरलाई फ्यानले पनि निकै मन पराएका छन् ।
चर्चित बलिउड अभिनेता सन्नी देवल भाजपामा प्रवेश, पञ्जाबबाट चुनाव लड्ने
काठमाडौं, ११ वैशाख । भारतीय चर्चित अभिनेता सनी देवल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)मा प्रवेश गरेका छन् । भाजपाका अध्यक्ष अमित शाहको प्रस्ताव स्विकार गर्दै बलिउड अभिनेता देवल भाजपा प्रवेश गरेका हुन् । योसँगै सनी देवल पनि राजनीतिमा आउने भएका छन् । भारतमा लोकसभा चुनाव जारी रहँदा अभिनेताहरु नेता बन्ने सिलसिलालाई सन्नी देवलले निरन्तरता दिएका छन् । उनी मंगलबार औपचारिकरुपमा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) मा प्रवेश गरे । दिल्लीमा आयोजिक एक कार्यक्रममा संघीय मन्त्री निर्मला सीतारमन र पियूष गोयलले उनलाई पार्टीमा भित्र्याएका थिए । उनलाई भाजपाले पञ्जाबको गुर्दासपुर निर्वाचन क्षेत्रबाट चुनाव लडाउने सम्भावना छ । भाजपाले पञ्जाब–अमृतसर, गुर्दासपुर र होसियारपुरमा उम्मेदवार घोषणा गरेको छैन । देवलले गत शुक्रबार पुनेमा भाजपा अध्यक्ष अमित शाहसित भेट गरेका थिए । त्यस भेटमा उनले आफूलाई चुनावमा उठाउन आग्रह गर
Apr222019 by Editorial DepartmentNo Comments
फ्यानलाई मन परेन निया शर्माको यो तस्वीर, सामाजिक सञ्जालमा भइन् ‘ट्रोल’
मुम्बई – बलिउड कलाकार निया शर्मा ‘हट’ कलाकारमध्ये एक हुन् । यी नायिका सामाजिक सञ्जालमा पनि खुबै सक्रिय हुन्छिन् । उनले सामाजिक सञ्जालमा ‘बोल्ड एण्ड सेक्सी’ तस्वीर शेयर गरिरहेकी हुन्छिन् । हालै नियाले एक तस्वीर शेयर गरिन् । तर, उक्त तस्वीरलाई फ्यानले ‘ट्रोल’ बनाइदिए । नियाले आफ्नो इन्स्टाग्राममा एक महिलाको तस्वीर पोस्ट गरिन् । जुन फोटोमा एक महिला एक कारमा पल्टेर बसिरहेकी छिन् । तस्वीरमा ठूलो पेट देखिएको छ । फोटो शेयर गर्दै उनले क्याप्सन लेखिन् – खाएपछि म यस्ती हुन्छु । यो फोटोलाई लिएर फ्यानले ट्रोल बनाएका हुन् । निया शर्माको इन्स्टाग्राममा झण्डै २ दशमलब ८ मिलियन फलोअर्स हो । कहिले टिभी शो ‘एक हजारमा मेरी बहिनी छिन्’ बाट चर्चामा आएकी निया कैयन् शोमा पनि देखिएकी थिइन् । उनको वास्तविक नाम नेहा शर्मा हो । निया उनी ‘खतरो के खेलाडी’ मा पनि देखिएकी थिइन् । नियाले आफ्नो हट र जबरजस्ती फ्
काठमाडौं । ‘नाम नहोस्, बद्नाम होस् तर गुमनाम नहोस्’ अक्सर राजनीतिकर्मी र फिल्मकर्मीमा यो भनाई प्रख्यात छ । र, यहि तरिकाका अनेक व्यवाहार देखिने पनि गरेका छन् । नेपाली राजनीतिकर्मी र फिल्मकर्मीले यो शैलीको लयलाई समातेकै छन् । त्यसमध्येकी एक हुन् रेखा थापा । उनी ख्याती कमाएकी अभिनेत्री त हुन् नै अहिले राप्रपा संयुक्तकी नेत्री पनि हुन् । मिडियामा आउने भोक उनको कम हुने गरेको छैन । कहिले फिल्म, कहिले नीजि जीवन, कहिले दिवस र उत्सबका अनेक हर्कत त कहिले राजनीतिक बयानबाजी उनका माध्यम बनेका छन् । आजभोली थापा फिल्ममा व्यस्त छैनन् । राजनीतिक बयानबाजी र मिडियाबाजीमा उनले फड्को मारेकी छन् । कुनै बेला नेकपाका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकै दलको प्रचारमा नाच्दै गाउँदै हिँडेकी थापा अहिले प्रचण्डकै आलोचनामा शव्द खर्च गर्न व्यस्त छिन् । प्रचण्डले बम पड्काएर विप्लव कहिँ पनि नपुग्ने बताएको खबर आउनासाथ